Warbaahinta Daljir oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay Munaasabadda Ciidul Fidriga. – Radio Daljir
Luulyo 5, 2016 1:22 g 0
(July 05 2016)-Ciid mubaarak waxaa Idaacadda Daljir ay dhammaan umadda Muslimiinta ah gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ugu hambalyeynaysaa munaasabadda ciidul Fidriga oo beri ku beegan.
Dhammaan maamulka iyo shaqaalaha Hay’ada warbaahinta ee Daljir waxa ay Muslimiinta uga baryayaan inuu ka aqbalo soonkii bishii Barkaysnayd ee Ramadaan uuna sanadka sanadkiisa kale barwaaqo iyo nabad ku gaarsiiyo.
Galabta ayaa waxaa qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya laga arkay bisha Shawaal waxaana dhammaan dalalka caalamka maalinka berito ah oo ku beegan 6 July looga dareerayaa munaasabadda ciida.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa+Daljir Xarunta Daljir Boosaaso 05 July 2016.